Madaxweynaha kenya mr uhuru kenyatta oo mucaaradka kenya udigay inay ku mudhaharaadaan wadooyinka | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Madaxweynaha kenya mr uhuru kenyatta oo mucaaradka kenya udigay inay ku mudhaharaadaan wadooyinka
madaxweynaha dalka mr uhuru kenyatta ayaa uga digay isbaheysiga mucaaradka dalka ee cord inay ku mudhaharaadaan wadooyinka iyagoo dalbanaaya in lakala diro gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC.
Madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay inay waajib tahay in mucaaradka ay u hogaansamaan dastuurka dalka hadii ay rabaan in gudiga madaxa banaan laga saaro xafiisyada.
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in tallaabo ay qaadi doonaan barlamaanka dalka lagu maareeyn doono dhibka mucaaradka go,aanka ay soo saaraan xubnaha barlamaanka dalka.
madaxweyne uhuru keyatta ayaa hadalkan kasheegay xili maanta uu jooga countiga Nyamira asaga iyo kuxigenkiisa mr wiliam ruto.
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa ku eedeeyay mucaaradka inay ka faaiidaysnaan kenyaanka aan dambiga laheyn iyagoo raba inay fushadaan ajendayaal iyaga gaar u ah.
sidookale madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in mudhaharadyada wata rabshadaha ay niyad jab kuyihiin dadkii maalgashanlahaa dalka.
dhanka kale madaxweyne kuxigeenka dalka mr william ruto ayaa ku booriyay kenyaanka inay midoobaan wuxuuna tilmaamay inuusan jirin qof kenyaan ah oo raba in dib loogu laabto wixii dhacay sanadihii 2007 dhamaadkeedii iyo bilowgii 2008-deedii.
madaxweyne uhuru kenyatta iyo kuxigeenkisa mr ruto ayaa booqasho kujooga countiga Nyamira iyagoo halkaasi ka fulinaaya mashruucyo hormarineed.